Wararka - Mashruuca Dhirta Cusub ee Ethylene Propylene Fluorinated
FEP Resin waxa uu leeyahay ku dhawaad ​​dhammaan sifooyinka wanaagsan ee Resin PTFE.Faa'iidada gaarka ah ee ay leedahay waa in lagu dhalaali karo warshadaynta, iyada oo loo marayo duritaanka iyo qaabaynta extrusion.FEP ayaa si weyn loogu isticmaalaa inta badan qaybaha soo socda:
1. qalabka elektarooniga ah iyo warshadaha korantada: wax soo saarka fiilada, xargaha xargaha, dhejinta saxaafadeed, khadka gaadiidka qalabka elektiroonigga ah ee soo noqnoqda, lakabka daboolka fiilada kombiyuutarka iyo qaybaha la xidhiidha;
2. warshadaha kiimikada: wax soo saarka ee dahaarka lidka ku ah tubaakada, tubooyinka, matoorada, weelasha, munaaradaha, kulaylka beddelashada iyo filtarrada anti-daxalka;
3. Warshadaha Mashiinada: wax soo saarka ee shaabadihii iyo biraha;
4. Warshadaha Difaaca Qaranka: wax soo saarka ee kirishbooyada aeronautical, dahaarka gaarka ah iyo qaybaha spare;
5. Warshadaha dawooyinka iyo caafimaadka: dayactirka valvayaasha wadnaha iyo hawo mareenada yaryar.
Sababtoo ah codsigan wanaagsan iyo baahida suuqa oo sii kordheysa, shirkadeena waxay go'aansatay inay maalgashato awoodda cusub.
Dhismaha cusub ee 5,000-tan/sanad FEP ee Shenzhou ayaa ku dhowaa inuu dhammaado.Waxay bilaabi doontaa inay soo saarto dhammaadka Janaayo ee soo socota. Warshada cusub waxay qabataa tignoolajiyada cusub iyo hababka wax soo saarka ee cusub.Iyada oo ku saleysan khibradeena qani ah ee wax soo saarka iyo cilmi baarista muddo ka badan toban sano, waxaan isku dayeynaa inaan siino macaamiisheena alaabada iyo adeegga ugu wanaagsan uguna xasilloon.Waxaan ku kalsoonahay in alaabtayada cusub ee FEP ay awoodaan inay beddelaan darajooyinka calaamadaha caalamiga ah.
Ujeedo si aad u hesho saami badan suuqa ee warshadaha-dhamaadka sare iyo galaan codsiga horumarsan, waxaan u heellan yihiin horumarinta iyo soo saari noocyo badan oo FEP iyo fluoropolymers kale lagu kalsoonaan karo. Waxaan la wadaagi doonaa oo cusbooneysiin doonaa horumarka FEP warshad cusub iyo mashaariicda.
Marka mashruuca cusub ee FEP la dhamaystiro oo la hawlgaliyo, guud ahaan awoodeena wax soo saarka FEP waxay sii ahaan doontaa hogaanka suuqa gudaha iyo saamiga suuqu wuxuu noqon doonaa in ka badan 50%, oo aad uga sarreeya tartamayaasha kale.Isla mar ahaantaana, heerka tayada ee FEP-ga wuxuu u kici doonaa heer cusub, isagoo siinaya taageero xooggan horumarinta mustaqbalka shirkadda.